ISIHLOMELO, INDLU YEZWE.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNelly
Kufuphi namazembe amakhulu, iLille, iArras, iTournai, iBéthune kunye neLens zingaphantsi kweyure enye/2, kunye neDouai imizuzu eli-10 kude. IsiHlomelo siyinxalenye ezimeleyo ngokupheleleyo yendawo yam. I-L'ANNEXE iya kukwamkela kwimeko-bume yosapho.Ukuhlala kwakho ubuchwephesha, ukufumanisa kwakho iimpelaveki, okanye ukuthatha iimviwo zakho (i-GAYANT EXPO 10 imizuzu kude) siya kubeka yonke into onayo ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi.
I-Annexe ibekwe umva ukusuka endleleni, kunye nembono yayo yegadi, yindawo yasemaphandleni edolophini! Indawo yayo yekhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukulungiselela ukutya kwakho. Kwaye ukuba imozulu intle ungayonwabela igadi!
4.86 out of 5 stars from 262 reviews
4.86 · Izimvo eziyi-262
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi262
Phakathi kwedolophu kunye namaphandle uya kufumana zonke iivenkile zasekhaya. Imizuzu embalwa uhamba ukusuka kwindawo yokubhaka ebalaseleyo, ejongene nemifuno emitsha evela kwifama yemfundo. Kancinci imarike enqumla iindlela enesikhululo segesi. Uya kufumana endleleni, iPosi kunye nomthengisi kunye nangaphezulu kumbindi wedolophana: iholo yedolophu, icawa, amaphephandaba ecuba e-café, ikhemesti, i-hairdresser, i-pizzeria, i-chip shop.
Umbuki zindwendwe ngu- Nelly
Ndiphendula ngokukhawuleza nasiphi na isicelo, ngokukhethekileyo nge-sms, kodwa ngokukhawuleza ngesayithi. Ndicela ukuba undazise malunga nexesha lokufika kwakho kusuku olungaphambili kuba sithanda ukwamkela kwaye sazane nabahambi bethu.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$225
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Roost-Warendin